Obi ike Teknụzụ Ọganihu CAPTCHA | Martech Zone
I kpọọ Captcha asị teknụzụ. Captcha bụ nkwenye nke ojiji. Kama ime ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe, teknụzụ na-akpachapụ ndị ọrụ anya ka o wee gbochie ihe odide hacking. Ghara ikwu na CAPTCHA bu ihe ngbochapu ohuru na teknụzụ OCR.
Captcha: Cn'ụzọ zuru ezu Aozi Pmkpịsị aka Test na-agwa Computer na Hebe Aakụkụ
Obi dị m ụtọ, onye ọzọ chere na ọ dịkwa egwu. Teknụzụ Nwere Obi Ike chepụtara ụzọ ọhụrụ iji gosipụta ndị ọrụ ebe ị na-akpọ edemede ederede na-akpọ Nkwenye CAPTCHA.
Obi ike CAPTCHA ™ bụ ihe clickable, foto CAPTCHA nke na-akwụsị spam na bots na weebụsaịtị site na ịjụ ndị ọbịa ka ị pịa foto ụfọdụ. CAPTCHA nwere obi ike bụ ihe ka mma na CAPTCHA - kwụsị spam na bots na blọọgụ, ụdị weebụ, ndebanye aha akaụntụ, saịtị tiketi na ndị ọzọ, na-akwụsị iwe ndị ọrụ, na-ebelata ịgbahapụ weebụsaịtị, na ịba ụba mgbanwe.
Obi ike CAPTCHA ™ dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka na ngwaọrụ mkpanaka gụnyere smartphones na mbadamba. Ihe mgbakwunye dị maka PHP, Java, ASP.NET, Python, WordPress, Drupal na Joomla. Enwere ike itinye ọrụ ahụ site na iji Software ha dị ka Ọrụ (SaaS) ma ọ bụ site na ịzụta ngwa ngwa. Ọ nwekwara ike na-acha ọcha labeled dị ka a akụrụngwa n'ime ndị ọzọ na enterprise ngwọta.
Tags: captchaobi ike recaptchateknụzụ nwere obi ikerecaptcha
Nov 29, 2012 na 11:46 PM
Nke a bụ ezigbo ọkwa! Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta otu a. Mgbe ụfọdụ, captcha na-ewe m ezigbo iwe ma ruo ugbu a, m ka na-enwe mgbagwoju anya banyere isi nzube ya mana echere m na captcha a nwere ntụkwasị obi ka mma. Ezigbo ọrụ!
Ọnụ ahịa Alicia
Dee 3, 2012 na 7: 37 AM
CAPTCHA bụ teknụzụ dị iche iche na - akpasu iwe na - enweghị ike ịnweta ọtụtụ mmadụ. Adị m nsogbu, ha anaghị ekwe m gụọ, nke mere na amalitere m iji ngwanrọ ngwanrọ CAPTCHA akpọrọ RUMOLA iji gụọ ma jupụta ha maka m. Pị na eserese ga-abụ naanị ndị ọrụ enyi ọkachasị na nyiwe mkpanaka!
Dee 3, 2012 na 10: 50 AM
Alicia - dị otú ahụ dị mkpa. Echetụbeghị m echiche banyere ihe ịma aka nke nsogbu dyslexics. Daalụ maka n'ọnụ!
Edozi Media na-abụ ngwa ngwa bụrụ onye ndu na ụdị a